Somali News 07.15.21 | KWIT
Gawaarida Iowans ayaa joogsan doona Caawa Magaalada Sioux maaddaama ay u sii jeedo Koonfurta Dakota. Kooxdu waxay gacan ka geysaneysaa inay soo galbiyaan haraadiga carruurta Dhaladka Mareykanka ah maadaama lagu celiyo dhulalka qabaa'ilka ee Koonfurta Dakota.
Xubnaha ka tirsan Rosebud Sioux Tribe ayaa dib u soo celinaya haraadiga 9 caruur ah oo ku halaagsamay Iskuulka Warshadaha ee Carlisle Indian ee Pennsylvania.
Gawaarida ayaa loo qorsheeyay in ay ku hakadaan Tama iyo Sioux City maanta, halkaas oo Native Iowans qorsheynayaan in ay la kulmaan oo ay la tukadaan xubnaha qabaa'ilka. Magaalada Sioux City kooxdu waxay ku qaban doonaan salaad sharaf xitaa War Eagle Park caawa 8:00 pm.
Saraakiisha koonaha waqooyi-bari ee Nebraska ayaa ka sheekeeynaya cod-bixinta doorashada isku-xidhka iskuulka maxalliga ah ka dib markii hal cod oo lagu kala saaray kuwa diidmada iyo diidmada ah. Norfolk Daily News ayaa ku waramaysa in shaqaalaha doorashada ee degmada Cedar ay tirinayeen codbixintii Talaadada doorashadii bond bond-ka ee Laurel-Concord-Coleridge Public Schools waxay tirisay 596 cod oo ka dhiibtay curaarta iyo 595 cod oo diiday. Dib u tirinta ayaa la qabtay Arbacadii.
Qiimaha dhulka beeraha ee Nebraska ayaa kor u kacay 6% sannadkan, sida ku xusan warbixinta ugu dambeysa ee Jaamacadda Nebraska – Lincoln ee 2021 Nebraska Farm Real Estate Market Survey. Celceliska qiimaha dhulka ag ee gobolka waa $ 2,895 halkii hektar, laakiin qiimayaashu aad bay ugu kala duwan yihiin gobolka oo dhan.